Banyere Anyị - Ligao (Zhongshan) Ọdụdọ ngwa oru Co., Ltd.
"Professional, ọhụrụ, ezi uche" bụ ụlọ ọrụ achụmnta ego nzube, "ezi okwukwe, ọhụrụ" bụ echiche. Iji nye ọrụ na ọkà ike technology, ọkachamara ngwaahịa, zuru okè ọrụ. Iji ike elu-edu ike esenyịn, Ligao oji na elu ike mma, na ka ị kwụpụ n'ihu. Ka green ike maka abamuru nke ihe niile a kpọrọ mmadụ.
Mee 1 ụbọchị ọrụ mba ụwa.
Ezigbo ndị ahịa, nwee olile anya na ị na-enwe ọmarịcha ụbọchị ọrụ mba ụwa nke 1st. Na olile anya na ihe ọ bụla na-aga nke ọma n’akụkụ gị. ma ọ bụrụ na ị na-achọ electronic ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka voltaji regulator / stabilizer, ike inve ...
Online Canton Fair na-abịa ọzọ! Welco ...
Online Canton Fair na-abịa ọzọ! Iji mee ka ị-ndị ahịa anyị bara uru hụ ngwaahịa ahụ nke ọma, anyị guzobere ụlọ ngosi 3D nke ime ụlọ anyị iji gosi ngwaahịa anyị. Pls jiri obiọma pịa n'okpuru njikọ ma ọ bụ nyochaa QR co ...
Rịba ama azụmaahịa sitere na LIGAO ltd.
Laghachi na Ọrụ, Malitegharịa ekwentị Production
Ezigbo Ndị Ahịa Bara Uru, Anyị, LIGAO ji ezi obi na-atụ anya na unu niile nwere azụmaahịa ka mma na 2021. Usoro mmepụta ihe nke ogbako anyị amalitela ugbu a. Anyị ga-anọgide na-enwe ọchịchọ ma melite ogo! Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ...
Faksị: + 86-760-2278 5288
Kpọtụrụ site na Skype